Noocyada Siyaasadaha Life Insurance iyo sida loo Badinta
Marka aad ka fikirto suddenness wixii dhacdooyin dhacaan oo qof ayaa u dhinta, waxaad Ogaan sida loogu baahan yahay yeesho siyaasado caymiska nolosha si loo ilaaliyo dadka aad jeceshahay in ay dhacdo ixtimaalka kasta. Falanqaynta kama dambays ah, Heshiiska caymiska nolosha ma keliya ilaaliyo qoysaska iyo kuwa la jecel yahay ama ku tiirsan, waxa kale oo ilaaliya mustaqbalka ay dhacdo in aad ugu danbeyn "diidaan inay u dhintaan!". Lacala haddii aan siyaasad caymiska nolosha aad ku egyahay iyo in aad weli ku nool yihiin, inaad cusboonaysiisaa laga yaabaa muddo ah nolosha ama isticmaal maalgelinta sida kaydka ah ee qaar ka mid ah waxyaabaha kale ee gaarka ah.
Iyada oo ku xidhan dalka, waxaa jira noocyo kala duwan oo siyaasadaha caymiska nolosha in tiraan geeri iyo nolol baahida macaamiisha, laakiin gudaha Maraykanka, labada qaybood oo waaweyn ee caymiska nolosha waa: caymiska nolosha oo dhan, iyo caymiska nolosha dheer - laakiin waxaa jira dhowr ka mid ah noocyada kala duwan ee caymiska nolosha ku hoos qoran, kuwaas oo labo qaybood oo waawayn. Siyaasadda caymiska nolosha oo dhan waa qorshe ah in aad ka iibsan for tiro go'an oo ah sano iyadoo heerka u premium go'an, iyo waxa ay leedahay faa'iido ah oo dheeraad ah oo loogu talagalay dheefaha maalgashi dhanka ah taas oo aad ka amaahan kartaa iyada oo aan la cashuuray aad isreebreebka. Laakiin siyaasadda caymiska nolosha dheer oo sidoo kale loo qaadan karaa baxa, tiro go'an oo ah sano, laakiin waxa aanu ka mid ah faa'iidooyinka iyo fursadaha maalgashi.
Qaddar bixin bishii kasta ama sannadlaha ah ee dadka dhallinyarada ah ay yihiin kuwo ka hooseeya ama ka raqiisan tahay marka aad ka weyn. Tusaale ahaan, sida nin dhallinyaro ah oo ku saabsan 30 sano aad bixin ku saabsan $100 billaha siyaasadda caymiska nolosha ee caymiska sanadle ah oo ilaa $250,000 laakiinse hubaal bixin intaas ka sii badan haddii aad tahay 40 sano kor ku xusan ee sannadlaha ah wadarta isku caymiska. In badan oo aad ka heli waayeelka ah ee qarash dheeraad ah aad Caymiska nolosha heli. Hadda, wakiilada caymiska ugu gudahood Maraykanka inta badan isku dayi lahaa in ay iska iibiso siyaasadaha caymiska nolosha oo dhan si aad u sababta oo ah waxay bixiyaan kaalmada sugidda iyo ilaalinta more, laakiin waxa ay u badan tahay in aan kuu sheegi doonaa in lacagta khidmada ay ku baxday lacag dheeraad ah iyo in ay helaan guddiyo badan oo ku saabsan noloshiisa oo dhan uu ka badan oo ku saabsan siyaasadda caymiska nolosha dheer. Dhab ahaantii, wakiilada helaan ilaa 80% khidmadaha aad hal sano ayaa sida guddiga inta ay helaan heer aad u hooseeya on nolol dheer.
Goortuu ka gartay boqol kor ku xusan, wax soo socota si ay u eegaan waa qadarka caymiska nolosha si ay u iibsadaan. Waxa jira arimo badan oo ah in laga fikiro ka hor inta ugu dambeyntii go'aaminta caymiska nolosha laakiin khubarada dhaqaalaha badan yihiin ee ra'yi ah waa in aad iibsato 5 ama qiimaheedu yahay 10-sano oo mushaharkiisa haatan ee. Tan iyo caymiska nolosha waa in la hubiyo in qoyskaaga weli ku raaxaysanayo calankooda hadda nool haddii ay dhacdo in aad geerida, khubaro opine in ay tahay sida ugu fiican si ay u iibsadaan ah 5-10 qiimihiisu sano oo mushahar aad hadda si qoyskaaga dhaqaale ma saameyn doonaan adiga dhimashada kadiska ah. Dhanka kale, aad heshay in ay Factor in dhacdooyin kasta oo ka mid ah carruurta waaweyn aad tageyso daryeelka iyo soo taxnaa inuu nafsaddiisa, ama waxa ku dhici doona xaaskaaga tago iyo in arrinta xannaaneynta ilmaha soo. Sidoo kale waa inaad ogaado sida ay u dheer tahay ama sida badan sano aad rabto inaad sii siyaasad caymiska firfircoon oo aan bixinkaro ka hor waxaa uu dhacayaa marka aad dhimato ama in ay u adeegaan ujeedooyinka maal-aad.
Tags:Siyaasadaha Life Insurance, Types of Life Insurance Policies